WASHINGTON — Mumwe murimi uye ari muzvinabhizimisi wekuGermany, VaHeinrich Von Pezold, vaive muridzi weBorder Timbers nemimwe minda yekofi kuManicaland nevamwe vavo, vakaendesa hurumende kudare reInternational Centre for Settlement of Investment Disputes kuParis, vachida kuripwa kutorerwa kwavakaitwa minda yavo. Dare iri riri pasi peWorld Bank.
VaVon Pozold vanoti vari kuda mari inosvika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora. Iyi iyave nyaya yechipiri Zimbabwe ichiendeswa kudare iri.
Muna 2009 hurumende yakaendeswa kudare iri nevarimi makumi mana vekuNetherlands vakanzi nedare vapihwe mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora iyo iri kuramba ichibereka kana isina kubhadharwa.